शेखर र सशांक दुवै भिड्लान सभापतिमा ? - Jhilko
शेखर र सशांक दुवै भिड्लान सभापतिमा ?
३ भदौ,२०७६ 231 0
काठमाडौं । आगामी कात्तिकभित्र पार्टीको स्थानीय संगठनलाई अन्तरिम व्यवस्था अनुरुप पूर्णता दिने सहमति नेपाली कांग्रेसभित्र भएको छ । यो सहमतिपछि आगामी स्थानीय निर्वाचनअघि नै १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न हुने संभावना बढेको छ । निर्वाचनमार्फत् नभई वरिष्ठताको मापदण्डका आधारमा वडा समिति, पालिका समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
आगामी कात्तिकभित्रमा यी समितिहरु गठन भए भने त्यसको छ महिनाभित्र अर्थात् २०७७ बैशाखभित्र जिल्ला अधिबेशन सम्भव हुन्छ । जिल्ला अधिबेशन सम्पन्न भएको कम्तिमा एक वर्षपछि महाधिबेशन गर्ने प्रावधान विधानमा छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिशन २०७८ बैशाखभित्रै हुने संभावना बढेर गएको छ । हुनत सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल २०७६ फागुन २० सम्म मात्रै हो । एक वर्ष म्याद थप्न सकिने विधानमा व्यवस्था छ । तर थपिने एक वर्षको म्यादभित्र १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न गर्न समयको पावन्दी हुने निश्चित देखिएको छ ।
२०७८ मंसीरमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । त्यसअघि नै १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न गर्नु कांग्रेस सभापति देउवाका लागि वाध्यता हो । त्यसअघि १४ औं महाधिबेशन गर्न नसके दुई वर्ष पछि धकेलिन्छ, अर्थात् प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न गर्न सम्भव छैन ।
कस्तो छ समिकरण ?
१३ औं महाधिबेशनमा देउवाले झिनो मतले सभापति पदमा चुनाव जितेका थिए । त्यो अवस्थाभन्दा यतिबेला देउवा पक्षको पकड कमजोर भएको छ । १३ औं महाधिबेशनमा साथ दिएकामध्ये तीन वटा गुटले देउवाको साथ छाडिसकेका छन् । तीन हजार दुई सय मतमध्ये तीन सय मतको हैसियत भएको कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले १३ औं महाधिबेशनमा साथ दिएका कारण देउवाले प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेललाई करिव दुई सय मत अन्तरले पराजित गरेका थिए ।
तर यतिबेला सिटौला समूहले देउवाको साथ छाडेको छ । यसैगरी गोविन्दराज जोशी समूहका नेता कुलबहादुर गुरुङ त्यतिबेला देउवाका प्रस्तावक थिए । तर यतिबेला जोशी समूहले पनि घोषणा गरेरै देउवाको साथ छाडेको छ । करिव एक सय भोटसम्म तल माथि गर्न सक्ने सामाथ्र्य जोशी समूहको छ । यस वाहेक अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी लगायतले पनि देउवाको साथ छाडेका छन् । कोइराला परिवारसँग निकट संवन्ध भएका फरमुल्लाह मन्सुर, अर्जुन जोशी लगायतले पनि त्यतिबेला देउवाको साथ दिएका थिए ।
देउवाले अर्को महाधिबेशनमा बाजी मार्लान कि नर्मालान ? भन्ने एकीन गर्न सकिने अवस्था तब आँउछ जब उनको इतर पक्षको समिकरण स्पष्ट हुन्छ । इतर पक्ष एकजुट भयो भने देउवाको केही लाग्दैन । उनी सभापति पदमा उमेद्वार नवन्न सक्छन् । तर इतर पक्ष एक जुट भएन भने देउवाले फेरि बाजी मार्छन । अहिले देखिएको समिकरण अनुसार वरिष्ठ नेता पौडेललाई अघि सार्दा इतर पक्ष एकजुट हुने अवस्था छैन ।
१३ औं महाधिबेशनमा पौडेललाई साथ नदिएका गोविन्दराज जोशी, सिटौला लगायतको समूहले १४ औं महाधिबेशनमा पनि पौडेललाई साथ दिने संभावना छैन । तर, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला सभापतिको उमेदवार बनेको अवस्थामा भने जोशी र सिटौला समूह मात्रै होइन तत्कालीन खुमबहादुर खड्का समूहले पनि साथ दिने अवस्था छ । तर, शशांकलाई अघि सारेर राजनीतिक सन्यास लिन पौडेल तयार नहुन सक्छन् । पार्टीले अवसर पाएमा पौडेललाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउने गरी महामन्त्री डा. कोइरालालाई सभापतिको उमेदवारका रुपमा अघि बढाउने गृहकार्यमा संस्थापन इतरका नेताहरु जुटेका छन् ।
महामन्त्रीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर कोइराला परिवारबाट नै डा. शेखर कोइरालालाई उठाउनु पर्छ भन्ने मत बलियो छ । डा. शशांकले समर्थन गरेको खण्डमा शशांकलाई दिने अधिकांश मत डा. शेखरलाई पनि जान्छ । दुवै जना सभापतिमा उठ्छन कि उठ्दैनन् र उठेमा शेरबहादुर देउवाले बाजी मार्छन । कोइराला वाहेक देउवा इतर पक्षमा रामचन्द्र पौडेलको वाहेक खासै चर्चा छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
योजना आयोगका कर्मचारी सिंहदरबार भित्रै मृत भेटिए
नेपालको हवाई यातायातः बाध्यात्मक सास्तीको यात्रा
१ जेठ,२०७६0270
मापदण्डविपरीत सञ्चालित पेट्रोल पम्प हटाइने
६ बैशाख,२०७६0215
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कलङ्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कलङ्की क्षेत्रको ट्राफिक...
अभियानकर्मी भन्छन् : स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनैपर्छ
६ फाल्गुन,२०७५0367
अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटी ३३५ सदस्यीय बन्ने
६ भदौ,२०७६0190
यसअघि पार्टीले एकतापछि अनेरास्ववियुको कमिटी २५१ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरे पनि आज...